दशैं बिदामा घुम्दै हुनुहुन्छ ? यी तपाईका गन्तव्य बन्न सक्छन् – Clickmandu
दशैं बिदामा घुम्दै हुनुहुन्छ ? यी तपाईका गन्तव्य बन्न सक्छन्
क्लिकमान्डु २०७४ असोज ७ गते ११:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । दशैं लागिसक्यो । विद्यालय तथा कलेजमा बन्द भइसके । अन्य कार्यालय पनि ३ दिनपछि बिदा सुरु हुन्छ ।
दशैंमा लामो बिदा हुने भएकोले घुम्न जाने प्रचलनपनि बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय समुहनै बनाएर घुम्न जाने प्रचालन बढ्दो छ । परिवार र साथी भाइसहित दशै विदामा घुम्न चहानेहरुका लागि विभिन्न स्थानहरु छनोट गर्न सकिन्छ ।
जसले गर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा घुमेर रमाइलो गर्ने अवसर हुन सक्छ । रोजगारी र कामका क्रमा देश विदेशमा रहेपनि दसैंमा जमघट भई रमाईलो गर्ने चलन छ । सवैलाई लामो र छोटो विदा सरकारी देखि निजी क्षेत्रका कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अवस्य मिलेको हुन्छ । जसमा साथीहरुसंग र पारिवारिक भ्रमण गरेर विदाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा धेरै गन्तव्यमा घुम्न जान सकिन्छ । केही गन्तव्यको बारेमा तल उल्लेख गरिएको छ ।
सडक क्षेत्रको पहुँच भएपछि मुगु जिल्लाको रारा ताल धेरैका लागि पर्यटकीय गन्तव्य बन्नपुगेको छ । समुद्रि सतहदेखि तीनहजार मिटर उचाइमा रहेको रारा तालले सुन्दरताका अनेक उपनाम पाएको छ ।
रारासँगै यस आसपासको पर्यटन पनि फस्टाउँदो छ । गर्मि समयमा रारा तालको यात्रा सुखद अनुभुति बन्न सक्नेछ । रारा तालको अवस्थिती र आकार नै प्राकृतिक सुन्दरताको उच्चतम नमुना मानिन्छ ।
से फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने डोल्पो अहिलेसम्म आन्तरिक पर्यटकका लागि अझै गन्तव्य बन्न सकेको छैन । गर्मिमा टे«किङ र ग्रामिण क्षेत्रको खास अनुभुति गर्ने चाहना छ भने डोल्पोलाई रोजाइमा राख्नुहोस ।
केही दिनको विदामानै घुम्न उपयुक्त स्थान हुन सक्छ काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–सौराहा । स्वदेशी विदेशी दुवै खालका पर्यटकका लागि प्रख्यात स्थान हुन गन्तव्य । काठमाडौंबाट पोखरा गएर एकरात दुई दिन बसेर मुख्या स्थानहरु घुमेपछि रात्री बस चढेर लुम्बिनी जान सकिन्छ । लुम्बिनी जाने उपयुक्त मौसम हो अहिले ।
त्यसपछि सौराह आएर थारु संस्कृतिको अवलोकन, साँझ राप्ती र नारायणी नदीको दोभानमा सुर्यास्तको दृश्य, अनि जंगलसफारीका लागि प्रख्यात छ चितवन । यतिमात्र नभएर चराचुरुङ्गी अवलोकनाका लागि पनि चितवन उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ ।
यो ठाउँ मयुर, च्याखुरा, पानी हाँस र चखेवाको वथानसहित अन्य चराहरुको बसोबासको थलो हो । शान्त र राष्ट्रिय निकुन्ज नजिकै भएकाले पनि बाघसमेत हेर्ने मौका मिल्न सक्छ ।
एतिहासिक मन्दिर जनपुरधाम विश्वभरका हिन्दुहरुको लागि चर्चित रहेको छ । जसमा बोर्डले तीन दिने प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
जनकपुर पुगेपछि आधा दिन जानकी मन्दिर, राममन्दीर, विवाह मन्डप, राजदेवी मन्दिर लगायत क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ । धनुस धामको पुजा, त्यसपछि सिताको विवाह भएको क्षेत्र लगायत ऐतिहासिक क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।